The Ab Presents Nepal » खेल हारेपछि पारसको प्रतिक्रिया– आज नेपालको दिन थिएन!
खेल हारेपछि पारसको प्रतिक्रिया– आज नेपालको दिन थिएन!
काठमाडौं-: सिंगापुरसँग पराजित भएसँगै टी–२० विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना टुटेको छ ।
खेलमा पराजय व्यहोरेसँगै नेपाली टीमका कप्तान पारस खड्काले आज नेपालको दिन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै कप्तान खड्काले सिंगापुरले राम्रो व्याटिङ गरेको बताए । उनले आज नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउँदै भने,आज हामीले राम्रो खेलेनौं । उनीहरुले राम्रो खेले, आज हाम्रो दिन थिएन ।’
यसो भने पारसले-:
सिंगापुरले निकै राम्रो क्रिकेट खेल्यो । उनीहरुले बलिङ र ब्याटिङ दुवै उत्कृष्ट गरे। उनीहरुले ब्याटिङ पिचको सदुपयोग गर्न सके । हामीले जस्तो ब्याटिङ गर्नुपर्ने हो त्यस्तो गर्न सकेनौँ । यो विकेटमा त्यति लक्ष्य भेटाउन सकिने नै हो, तर हामीले गर्न सकेनौँ ।
बलिङमा पनि हामीले राम्रो गर्नुपर्ने थियो । उनीहरुको ब्याटिङ राम्रो हो । हामीले नै ब्याटिङ पिचको फाइदा उठाउन सकेनौँ । विश्वकप खेल्ने योजना छ भने १ सय ९२ रनको लक्ष्य त पूरा गर्नै पर्ने हो । दुर्भाग्य भनौँ आज हाम्रो दिन थिएन । प्रतियोगिता भरि नै हामीले आफ्नो राम्रो क्रिकेट खेल्नै सकेनौँ ‘।
नेपाली क्रिकेट यहाँसम्म आइपुग्न हामीले धेरै नै मेहनत गरेका हौँ । सिंगापुरका खेलाडीहरु पनि राम्रा देखिएका छन् । उनीहरुले मेहनत बढाउँदै जाँदा अझ बढी सफलता पाउने नै छन् । ग्लोबल क्लालिफायरमा पुगेको सिंगापुरलाई बधाई’ ।
नेपाल सिंगापुरसँग ८२ रनले पराजित भएको छ । यो पराजयसँगै नेपालको टी ट्वान्टी विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर भएको छ’।
आईसीसी टी(ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलको अन्तिम खेलमा नेपाल घरेलु टोली सिंगापुरसँग पराजित भएसँगै नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्न असफल भएको हो । सिंगापुर भने फाइनलको विजेता बन्दै ग्लोबल छनोटमा पुगेको छ ‘।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले पुरै २० ओभर खेल्दै ६ विकेट गुमाएर १९१ रन बनाएको थियो । खराब सुरुवात गरेपनि रोहन रंगराजन र टिम डाभिडले सिंगापुरको इनिङ्स उकासेका थिए । मात्र १० रन जोड्दा पहिलो विकेट गुमाएको सिंगापुरका लागि रोहन र टिमले दोस्रो विकेटका लागि ८९ रनको साझेदारी गरेका थिए ‘।